आहा, अनितालाई फेरि आयो यसरी सहयोग ,अनिता यसरी पत्रिका पढ्ने भइन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on आहा, अनितालाई फेरि आयो यसरी सहयोग ,अनिता यसरी पत्रिका पढ्ने भइन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम होलान् । यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्तविकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ । अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वास्थमा निकै नै सुधार आएको छ । कुनै समय अनिताको शरीरको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको थियो ।
तर अहिले अनिता निकै मोटाएकी छिन । अहिले उनको तौल बढेर ५५ किलो पुगेको छ । अ`प्रेसन फे`ल भईसकेपछि निकै नि दु`खद समयबाट गुज्रिरहेको अनिता परिवार अहिले भने सामान्य खुसि र अधिक्तम दु`खि नैछ खुसि यो मानेमा कि अनिता हिड्न सक्ने सम्म भइन अनि दुख चहि उनको उपचार पै`सा अ`भावले गर्दा रोकिएको छ ।
भगवान् जस्ता श्रीमान पहिलो पटक नै थियो यसरी रो`एको, अनिताको सु-स्वास्थ्यका लागि उनले आफ्ना आ`शुहरुलाई लुकाउनै सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय अनिता खड्काको स्वास्थमा एकदमै क्रमिक सुधार देखिएको छ । अस्पतालमा अनिताको राम्रो हेरचाह र स्याहार सुसार गरेर आमाजु दिदी बसेकि छिन्।
बिनोद पनि कहिलेकाही मात्रै आउन पाउँछन् किनकि काम जो उनले गर्नुपर्छ र कामसगै अनिताको उपचारका लागि खर्च जुटाउने जिम्मा जो उनको काधमा छ । उनी अनितालाई बेलाबेला हेर्न आउँछन् अनि उनी आएसगै अनितालाई खुसि राख्ने हर प्रयत्न गर्छन् र अन्तत जाने दिन आइहाल्छ अनि फेरि छुटिन जो गाह्राे हुन्छ ।
७७ जिल्लामै आफ्नो शेवा पुर्याउने उद्देश्यले टिकटकको माध्यमबाट सेवा/सहयोग गर्दै आएको मानव सेवा समाज अष्ट्रेलियाका संस्थापक केपि सेढाइ ज्युले जो आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेकाहरुलाई सेवा पुर्याउदै आउनुभएको छ । केपि सेढाइ ज्युको एघारौं एपिसोडमा कसैलाई सेवा गरिदिनु भनेर अष्ट्रेलियामा बस्ने ममता क्षेत्रि ज्युले दिनुभएको रु आठ हजार एक सय पचास ,गुल्मि जिल्ला भइ हाल काठमाडौं स्थित ब्रेनह्यामररेज बाट पिडित जो उपचार गराइरहेकि अनिता खड्कालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सम्पूर्ण मानव सेवा समाज परिवार र ठूलो मनकि धनी ममतालाई अनिता परिवारले स-धन्यवाद दिएको छ । साथै अनिताको हातमा पत्रिका दिएर उनलाई पढाउने प्रयत्न गरेको र अनिताले पढ्न खोजेको भिडियो समेत अहिले सामाजिक संजालभरि निकै भाइरल छ ।हेर्नुस् भिडियो सामाग्रीः